ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ Barမှာ လူတိုင်း လာသောက်ချင်အောင် ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ကြမယ် | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
ဒီဘက်ခေတ် (၂၁)ရာစုမှာ လူငယ်တော်တော်များများဟာ ဘားထိုင်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုလိုမျိုး ကျင့်သုံးလာကြပါတယ်။ ကော့တေးတစ်ခွက်နဲ့ ရီဝေဝေအရသာကို ခံစားရင်း ဘော်ဒါတွေနဲ့ စကားစမြည် ပြောရတဲ့ ညနေခင်းကို လူငယ်အများစုက မက်မောကြပါတယ်။
အုံ့မှိုင်းမှိုင်း ရာသီဥတုဟာ ယမကာ မှီဝဲဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ရာသီဥတုလို့ ခေတ်လူငယ် တော်တော်များများက လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုလူမျိုးတွေကို အုံ့မှိုင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာတင်မကဘဲ (၁၂)ရာသီ သောက်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်ချင်တဲ့ ဘားပိုင်ရှင်တွေအတွက် နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
လူသိများတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့ အစားအသောက် ကောင်းမွန်ခြင်းက အရေးကြီးဆုံး ဆိုပေမယ့် ဘားတွေမှာတော့ စားသုံးသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်စေတဲ့ အရာက ဆိုင်ထိုင်ရတဲ့ Mood ပါပဲ။ အစားအသောက် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း မုဒ်မကောင်းရင် ဘယ်သူမှ ကြာကြာ မထိုင်ချင်ဘူးနော်။
ဒါဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ထိုင်ချင်စဖွယ် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ?
အမိုက်စား Decoration တွေရဖို့ Restaurant Decor Service တွေအထိ အကုန်အကျခံ အပ်နှံစရာမလိုပါဘူးနော်။ မိမိကိုယ်တိုင် လွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်ရုံ၊ ပြင်ဆင်ရုံနဲ့ ထိုင်ချင်စဖွယ် ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၁။ ဆိုင်ရဲ့ Theme ကို တိကျပါစေ။
ကိုယ့်ရဲ့ဘားက ဘယ်လို Theme မျိုး ရှိချင်တာလဲ ဆိုတာကို အရင်ဆုံး စဉ်းစားရပါမယ်။ ကိုယ့်ဆိုင်ကို Romance ဆန်တဲ့ နေရာမျိုး ဖန်တီးချင်တာလား? ဘော်ဒါတွေနဲ့ Chill လို့ကောင်းမယ့် နေရာမျိုး ဖြစ်ချင်တာလား? တစ်ယောက်ထဲလည်း လာသောက်လို့ ရမယ့် ဆိုင်မျိုး ဖြစ်ချင်တာလား ဆိုတဲ့ ဆိုင်ရဲ့ Theme သို့မဟုတ် Audience ကို အရင် ရွေးချယ်ပါ။
၂။ မီးအလင်းအမှောင် ကစားတတ်ပါစေ။
မီးအရမ်းလင်းပြီး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ထင်းနေတဲ့ ဘားမျိုးဆို ဘယ်သူမှ ထိုင်ချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ မီးရောင်မှိန်ပြပြနဲ့ ရီဝေဝေ ဖြစ်လာစေမယ့် ဘားမျိုးကိုပဲ လူတွေက ထိုင်ချင်ကြတာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်က မီးအလင်းအမှောင်ကို ရွေးချယ်မယ်ဆို တတ်နိုင်သမျှ မှိန်တဲ့အရောင်ကို သုံးပါ။
၃။ သုတ်ဆေး အရောင် မှန်ပါစေ။
ဘားအတွက် ဆေးသုတ်တဲ့အခါ တတ်နိုင်သမျှ ဝါတဲ့ဘက်ကို သုံးလို့ရပါတယ်။ ဆေးသုတ်တဲ့အခါ ကိုယ်တပ်မယ့် မီးအရောင်နဲ့လည်း ချိန်ညှိရပါမယ်။ ဆေးကလည်းအဝါ၊ မီးကလည်းအဝါဆို ကြည့်ရဆိုးပါတယ်နော်။ မှိန်ပြပြ မီးရောင်မှာ ရီဝေဝေ ဖြစ်လေလေ ဘားထိုင်ရတဲ့ အရသာ ပီပြင်လေပါပဲ။
၄။ Theme နဲ့လိုက်မယ့် ခုံတွေကို ရွေးချယ်တတ်ပါစေ။
ဘားထိုင်မယ့် လူအများစုက နာရီနဲ့ချီပြီး ကြာကြာထိုင်တတ်ကြတာမို့ ခုံတွေကို သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်မယ့် ထိုင်ခုံမျိုးကို ရွေးချယ်ပေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဘားတွေကတော့ Chill လို့ကောင်းမယ့် နေရာမျိုး ဖန်တီးထားတာမို့ ထိုင်ခုံကို အရမ်းအသားမပေးတာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ့်ဆိုင်လာတဲ့ လူအများစုက ဘယ်အသက်အရွယ်တွေလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။
၅။ Menu စုံပါစေ။
အသောက်တလိုင်းတွေအတွက် ပုလင်းရှိရင် ပြည့်စုံပေမယ့် အသောက်အပြင် အစားပါ စားချင်သူတွေအတွက်တော့ ဘားရဲ့ Menu ကလည်း အသက်ပါပဲ။ အရက်နဲ့ မြည်းလို့ကောင်းမယ့် အစားအစာတွေအပြင် သီးသန့် စားလို့ရမယ့် အစားအစာ အနည်းဆုံး (၂)မျိုး (၃)မျိုးလောက် ရှိထားသင့်ပါတယ်နော်။
၆။ ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းပါစေ။
ဘယ်လောက်ပဲ ရစ်တဲ့ စားသုံးသူမျိုး လာပါစေ၊ ကိုယ့်ဆိုင်က အပြုံးမပျက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ဆိုင်ကို လူတွေက ရင်းနှီးလာပြီး တစ်ခြား ကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ ရှိလာရင်တောင် သင့်ဆီပဲ ရောက်လာမှာပါ။
Food and Drink Read 28 times